Iindaba - Ingcaciso kunye nohlalutyo lweTekhnoloji yeCrankshaft yokuThengisa
Ingcaciso kunye nohlalutyo lweCrankshaft yeMveliso yeTekhnoloji
Crankshafts ezisetyenziswa ngokubanzi iinjini. Okwangoku, izinto zeinjini zeemoto ikakhulu ziyintsimbi kunye nentsimbi. Ngenxa yokusebenza kakuhle kokucheba i-ductile iron, unyango olwahlukeneyo lobushushu kunye nokomeleza unyango lwenziwa ukuze kuphuculwe ukudinwa, ubulukhuni kunye nokunxiba ukumelana necrankshaft. I-ductile crankshafts yentsimbi inexabiso eliphantsi, ke i-ductile crankshafts isetyenzisiwe kakhulu ekhaya nakwamanye amazwe. Apha ngezantsi siza kwazisa iteknoloji yokuvelisa i-crankshaft.
Itekhnoloji yokuvelisa i-Crankshaft:
1.Ukuphosa iteknoloji ye-ductile crankshaft yentsimbi
Ukufunyanwa kobushushu obuphezulu, isalfure, isinyithi esulungekileyo esinyibilikayo sisitshixo sokuvelisa intsimbi ekumgangatho ophezulu. Izixhobo zemveliso yasekhaya ubukhulu becala zisekwe kwi-cupola, kwaye intsimbi etyhidiweyo ayenziwanga kwangaphambili; okwesibini kukucoceka okuphezulu kwentsimbi yehagu kunye nomgangatho wecoke ongalunganga. Okwangoku, kuye kwamkelwa indlela yokunyibilikiswa kwangaphambi kokuncibilikiswa komhlaba, esebenzisa ikomityi ukunyibilikisa isinyithi esinyibilikisiweyo, isenza isulfure ngaphandle kweziko, emva koko ishushu kwaye ilungelelanise ukwenziwa kwiziko lokungenisa. Okwangoku, ukufunyanwa kwezinto zentsimbi ezityhidiweyo zasekhaya kuye kwenziwa ngokubanzi kusetyenziswa i-spectrumeter yokufunda ngokuthe ngqo.
Inkqubo yokubumba impembelelo yomoya ngokucacileyo ingaphezulu kwenkqubo yohlobo lwesanti yodongwe, kwaye i-crankshaft ephezulu inokuchaneka. Ukubumba kwesanti okuveliswe yinkqubo ineempawu zokungabikho kwe-rebound deformation, ebaluleke kakhulu kwi-crankshaft ye-multi-turn. Okwangoku, abanye abavelisi be-crankshaft e-China bazise iinkqubo zokuhamba komoya ezivela eJamani, e-Itali, eSpain nakwamanye amazwe. Nangona kunjalo, kuphela ngabavelisi abambalwa abazise yonke imveliso.
2. UKWENZA Itekhnoloji yentsimbi crankshaft
Kwiminyaka yakutshanje, inani lezixhobo zokwenza ubuchwephesha ziye zaziswa e-China, kodwa ngenxa yenani elincinci, elidityaniswe netekhnoloji yokuvelisa ukungunda kunye nezinye izibonelelo, ezinye izixhobo eziphambili azikayidlali indima yayo efanelekileyo. Ngokubanzi, zininzi izixhobo zokwenza izinto ezindala ezifuna ukulungiswa kunye nokuhlaziywa. Kwangelo xesha, iteknoloji ebuyela umva kunye nezixhobo zisahleli kwindawo ephezulu, kwaye ubuchwepheshe obuphambili busetyenzisiwe kodwa abukasasazeki.
3. Itekhnoloji yokulungisa oomatshini
Okwangoku, uninzi lwemigca yecrankshaft yasekhaya yenziwe ngezixhobo zomatshini eziqhelekileyo kunye nezixhobo ezikhethekileyo zomatshini, kunye nokusebenza kwemveliso kunye nokuzenzekelayo ziphantsi. Izixhobo ezirhabaxa ikakhulu zisebenzisa isixhobo esinezixhobo ezininzi zokujika ijenali ephambili yentamo kunye nentamo, kwaye uzinzo lomgangatho wenkqubo ulihlwempu, kwaye kulula ukuvelisa uxinzelelo olukhulu lwangaphakathi, kwaye kunzima ukufezekisa okufanelekileyo umatshini isibonelelo. Ukugqitywa ngokubanzi kusetyenziswa oomatshini bokugaya i-crankshaft ezinje nge-MQ8260 yokugaya-ukugqiba-ukugqiba-ukugaya-ukucola, ngesiqhelo ngokusebenza ngesandla, kwaye umgangatho wokuqhubekeka awuzinzanga.
4. Unyango lobushushu kunye nokomeleza iteknoloji yonyango yomphezulu
Itekhnoloji ephambili kunyango lwe-crankshaft yonyango oluqinisa umphezulu. I-Ductile crankshafts zentsimbi ziqhelekile kwaye zilungiselelwe ukulungiswa komhlaba. Ukomeleza umphezulu kunyango ngokubanzi kusetyenziswa ukuqina kwe-induction okanye i-nitriding. Iintsimbi zentsimbi ezibunjiweyo zishicilelwe kwiphephancwadi zaza zarhangqwa. Izixhobo ezingeniswe ngaphandle zibandakanya umatshini wokucima i-AEG ngokuzenzekelayo kunye nomatshini wokucima i-EMA.
I-Wuxi ekhokelayo yokuLungisa oomatshini Co., Ltd. inikeza abathengi bonke ubungakanani epheleleyo iinkonzo zokubumba zesinyithi iinkqubo ezizodwa.